Alahady 01 Desambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
“Iaino ny fiadanan'ny Tompo"
“Fiadanana, fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky! hoy Jehovah, ka dia hahasitrana azy Aho.” Isaia 57 : 19
Mandia ny volana farany amin’ity taona 2019 ity isika ankehitriny ka izany no isaorantsika sy hiderantsika ny Tompo. Izy no mbola manome ny fahasoavany ho antsika ka afaka miombom-po sy fiderana ary miombom-bavaka eto an-tranony.
Lohahevitra vaovao no hobanjin’ny Fiangonana ao anatin’ity volana Desambra ity dia ny hoe : “IAINO NY FIADANAN’NY NY TOMPO” .
Ny mpitandrina RAZAFINARIVO ANDRIANTSILAVINA Nofy , izay miana-draharaha eto amin’ny Fitandremana ankehitriny no nitarika ny fanompoam-pivavahana . Ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra.Nisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ka niara-nisalahy nanatanteraka izany ireo mpitandrina mirahalahy mianaka voalaza etsy ambony ireo.
Alahady voalohany ao anatin’ny volana moa ny androany koa toy ny efa fanao eto amin’ny fitandremana dia nisy ny fiarahabana ireo rehetra izay nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany tamin’iny volana Novambra lasa teo iny. Miisa 65 mianaka izy ireo no tonga teto amin’ny Fiangonana ary niaraka nanatanteraka ny raki-pisaorana teo amin’ny alitara masina ho mariky ny fisaorana ny Tompo.
Atoa Seta RAJAOFETRA no nitarika ny Fiangonana tamin’ny hira teo amin’ny fitendrena ny Orga ary niara-nisalahy taminy tamin’izany ny mpikambana ao amin’ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno. Taorian’ny fiarahabana Apostolika nataon’ny mpitarika dia ny tenin’ny Soratra Masina araka izay hita ao amin’ny LIOKA 19 and. 38 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : “Isaorana anie ny Mpanjaka, Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah. Fiadanana any an-danitra, ary voninahitra any amin’ny avo indrindra.” Amen !
Ny hira fanevan’ny faha 200 taonan’ny Sekoly FJKM no niarahan’ny Fiangonana niredona
Sy niray fo tamin’ny fanombohana izao fanompoana masina izao.
Raha nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika dia indro atolotra anao etoana izany :
“Ry Tompo be fitiavana o!, Endrey ny fitiavanao anay izay lehibe mihoatra ny zavatra rehetra. Nomenao fotoana izahay ka tonga soa aman-tsara eto an-kianjanao. Koa ankehitriny Andriamanitra o ! aoka izay rehetra hotanterahanay eto na ny fideràna sy izay rehetra hotanterahanay eto dia horaisinao fa avy amin’ny fonay izany. Ho anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra ry Tompo tianay o! Amen!”
Izao kosa no sitrapon’Andriamanitra nambara tamin’ny Fiangonana : Levitikosy 26:3 ; Levitikosy 26:6 “raha manaraka ny lalàko sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankato izany dia homeko fiadànana eo amin’ny tany ianareo ka handry fahizay Amen!” .
Taorian’izany dia nohiraina ny hira FFPM 68 and. 1,3 “Re tokoa ny feon’anjely”
Eo anatrehan’ny Sitrapon’Andriamanitra dia tsy tanteraka isika ka noho izany dia mila mifona isika mba hamitram-piavanana Aminy amin’ny alalan’izao vavaka izao : “Ianao ry Tompo no efa niteny fa raha manaraka ny lalànao izahay sy mitandrina ny didinao ka mankato izany dia homenao ny fiadananao izahay ka handry fahizay. Indrisy anefa Andriamanitra o! . Amin’ny fiainanay zanak’olombelona dia mandeha araka izay tianay handehanana izahay ka tsy manaraka ny didinao sy ny lalànao izahay ary tsy mankato ihany koa. Mifona eo anatrehanao ary izahay Andriamanitra o! Ary amin’ny alalan’i Jesoa Kristy sy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no angatahanay izany koa indreto ary izahay, vonona ny hanaraka ny lalànao, ny hitandrina ny didinao ary ny hankato izany . Izahay tsirairay avy eto ihany koa anefa Tompo dia manana izay antony hifonanay Aminao koa manao izao vavaka mangina izao izahay…Andriamanitra tsy lalodalovana ianao ary mamaly ny fifonanay. Ataonay izao vavaka izao amin’ny anaranao Jesoa Kristy, Mpamonjy anay Amen!”
Ny hira FFPM 354 : 1-2 “Ny Mpamonjy no mitady fihavanana!” no nohiraina ho fifonana amin’ny Tompo.
Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina ny Tompo ka mamela ny fahadisoantsika. Raiso am-pifaliana ny teny famelan-keloka izay hambaran’ny Tompo aminao ankehiriny: “Satria nino hanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, Izaho efa nihaino anao , tongava aminao araka izay nirinao, voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina. Amen”
Taorian’ny fandraisana ny famelankeloka dia nohiraina ny hiran’ny Finoana FFPM 70 and. 3, 4 “Izy no Tompo nahary ka maneke” ary rehefa izany dia natao ny fanekem-pinoana laharaha voalohany.
Ny mpitandrina RAZAFINARIVO Nofy ihany no nanatanteraka izany.
Nanatanteraka vavaka avy hatrany izy tamin’izany ary rehefa izany dia teo am-pitsanganana kosa no novakian’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny teny araka ny 1 Samoela 25 and. 6 : “ fiadanana anie ho anao, ary fiadanana ho amin’ny ankohonanao, ary fiadanana ho amin’izay anananao rehetra.”.
Izany hafatra izany no nanaovana fampiharana , ka naseho tamin’ny alalan’ny fihetsika mba ho tadidy sy hiraika ao am-po.
Mialoha ny fanambarana ny raharahan’ny Fiangonana dia nanatontosa ny anajara hirany ny Sampana Taninketsa tamin’ny alalan’ny hira hoe : “LIGHT OF THE WORLD”
Ratoa RAKOTOMANANA Andrimbazotiana no nanatanteraka izany.
– Hisy ny Fambolenkazo hotanterahina eo anivon’ny Foibe FJKM ny Sabotsy faha 21 desambra 2019 . Ny fihaingana dia amin’ny 6 ora maraina eo amin’ny Esplanade Analakely. Ny toerana dia eny Andanona.
– Ity herinandro mitsidika ity no herinandrom-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady ka ny Alahady faha 8 desambra 2019 no ivony.
– Ny Alahady faha 15 Desambra no fanolorana ny valisoa ho an’ny nantanteraka ny fahalalana soratra masina sy ireo afaka fanadinana ara-panjakana sy teo amin’ny sehatry ny fiangonana
– Manomboka ny Alakamisy faha 19 desambra ny herinadr sambatra.
– Azontsika teto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ny amboaran’ny filohan’ny FJKM teo amin’ny taranja Volley-Ball ary ny laharana faharoa teo amin’ny taranja Basket-Ball
Rehefa avy niarahaba ny mpianakavin’ny finoana izy ary nisaotra an’Andriamanitra noho ity fotoana ahafahantsika manompo Azy ity dia nanao ireto fanentanana ireto:
– Nanentana ny mpianakavin’ny finoana, ny ankizy sy ny tanora, amin’ny fianarana ny fety Krismasy..
– Nanentana ihany koa ny amin’ny fanomboan’ny taom-pianarana vaovao eo amin’ny fianarana Katekomena izay hanomboka ny Alahady faha 8 desambra 2019 amin’ny 02:15ora
Niarahaba ireo nahatratra ny tsingerin-taona nahaterany tamin’iny volna Novambra lasa iny ny fiangonana. Nisy ny tenin’ny Soratra Masina nentina nirary soa azy ireo dia araka izay hita ao amin’ny 1 Samoela 25 and. 6 : “: trarantitra ianao, fiadanana anie ho anao, ary fiadanana ho amin’ny ankohonanao, ary fiadanana ho amin’izay anananao rehetra.”.
Nanatanteraka vavaka ho azy ireo ny fiangonana ary rehefa izany dia nanao ny rakitra teny amin’ny Alitara, izy 65 mianaka izay tojo izao tsingerin-taona izao
Ny Biraon’ny Fiangonana Haja Ralaindimby no namaky izany.
Ireto no hira nangatahan’ny Mpianakavin’ny Finoana izay nanatanteraka ny Voady sy raki-pisaorana : FFPM 170 :2 / FF 37 : 2 / 731 :1 / Andriamanitra e mahagaga / HF 12 – feno toky / HF 43 – vavaka /
– Teo ny mpianakavin’ny finoana mitalao amin’ny Tompo noho ny trangam-piainana rehetra ka mangataka ny Tompo mba ataony mpandresy amin’izany ady izany.
– Tao no nahatsiaro ny tsingerin-taonan’ny fanambadiany ka nisaotra ny Tompo.
– Tao ny mpianakavin’ny finoana izay nisaotra sy nidera an’Andriamanitra noho ny fahasitranan’ny zanany ary mangata-bavaka ho an’ilay ankizy iray mbola eny amin’ny hopitaly .
– Nisy ny nangata-bavaka noho ny fiatrehan’ny zanany fandidiana.
– Tao ny Renim-pianakaviana izay nangata-bavaka fa miatrika ady mafy eo amin’ny fiainana
– Teo ny nisaotra ny Tompo noho ny valim-bavaka fa nahazo asa .
Fanolorana ny Rakitra Hira 71 : 3 “Mba omeo ny fonao fa anagatahany”
Atao HAJA RANDRIANANDRASANA no nanatanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny ary Ratoa Norosoa ANDRIAMANAMPY kosa no namaky misesy ireo perikopa voalahatra hovakiana androany. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Isaia 57: 15-21. Ny Testament Vaovao kosa dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 19: 37–44 ary ny epistily dia ny Jakoba 2:14-20.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. Tamin’izany no nilazany fa miditra amin’ny lohahevitra vaovao isika ankehitriny dia ny hoe : IAINO NY FIADANAN’NY TOMPO”. Noraisiny hitondrana ny hafatra tamin’izany izay voalaza araka ny Isaia 57 : 15-21
Raha ny teny hoe FIADANANA no jerena ao amin’ny Baiboly dia miverina in -292 izany ao amin’ny baiboly.
Ao amin’ny testamenta taloha dia in-207 miverina izany ary in-85 kosa no ahitana azy amo amin’ny testament vaovao.
Midika izany fa tena teny manan-danja eo amin’ny fiainana amin’ny fanarahana ny Tompo io teny hoe FIADANANA io.
Isika Olombelona dia noharian’Andriamanitra hiadana hatramin’ny andro voalohany. Nohariana hanjaka sy hiadana amin’ireo voahary rehetra.
Fa rehefa lavo noho ny fahotana ny olombelona noho ny tsy fanarahana ny sitrapon’Andriamanitra dia rava ilay fiadanana. Tafiditra ao amin’ny fiainan’ny fahavalon’ ny fiadanana. Tsy nisy fiadanana intsony teo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona ary izany dia
miantraika hatrany amin’ny voahary rehetra manodidina azy ihany koa.
Ny fahafatesana no nanjaka, nandevona ny voahary samihafa.
Ny fiadanana dia avy amin’Andriamanitra irery ihany . Raha tsy miavana amin’Andriamanitra izany isika dia tsy ahita ny fiadanana.
Ny Zanak’Israely dia lasa babo tany babylona ary nisy ihany ny tafajanona nefa tsy nanam-piadanna.
Nofaizin’Andriamanitraa izy ireo satria niala Taminy.
Nampanantena ny zanak’israely anefa Andriamanitra fa hamerina azy indray amin’ny taniny.
Ny fiadanana dia atolotry ny Tompo ho an’izay miverina amin’ny Tompo sy mibebaka aminy.
Ny lioka 19:37-42 no manambara fa Jesoa Kristy no hitondra ny fiadanana, ny fanjakan’ny Mesia.
Ny fiadanana omen’i Jesoa Kristy dia ny fiadanana ara-panahy.
Ny an’izao tontolo izao dia fiadanana ara- nofo.
Ny an’i Kristy kosa dia ilay fiadanana ara-panahy.
Io fiadanana izay atolotr’i Kristy io ary no raiso ho anao fa izany no ahazakana ny fiainana.
Tandremo ny théologie de la prosperité na ilay fiadanana manin-doka ivelany fotsiny fa isika dia aoka hitoetra mandrakariva amin’ny fiadanan’ny Tompo dia ny ahazoantsika ilay fiainana mandrakizay.
Ny fiadanana dia omen’ny Tompo ny vahoakan’israely;
Ny ratsy fanahy dia tsy ahita ny fiadanana.
Satria tsy mahalala an’Andriamanitra izy. Ny fiainany dia manalavitra an’Andriamanitra.
Aoka ary isika hikatsaka mandrakariva ilay fahasoavan’ny Tompo . Izy izay manome antsika ny fiadanany ary aoka ho fiainana ho antsika izany.
Mialoha ny vavaka fangatahana dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena tamin’ny alalan’ilay hira hoe : “Mahatoky ka tokony ekena” , hira noforonin’i Atao Rajaofetra John
Natao ny hira FFPM 465 :1,4
Natao ny famakiana ny Tondrozotra ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.
Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FFPM 625 and 1,5. Izao fanompoam-pivavahana izao ary taorian’izany dia niatrika ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ny Fiangonana.
Teo amin’ny fafana dia atoa RABAKO Tovohery no nikarakara izany. Ny niandraikitra ny fanamafisam-peo dia atoa RAMAHERY Yves .
Joel Ranaivoson no naka ny feo.
Nandray an-tsoratra RABAKO Tovohery. Naka ny sary RANAIVOSON Joël